सृष्टि बिना निराजनलाई के भयो ? (भिडियो) « Ramailo छ
सृष्टि बिना निराजनलाई के भयो ? (भिडियो)
प्रकाशित मिति : Mar 7, 2018
निर्देशक निशान घिमिरेको निर्देशनमा ‘तिमी बिना’ भिडियो सार्वजनिक भएको छ । भिडियोमा मोडलद्धय निराजन प्रधान र श्रृष्टी खड्कालाई फिचरिङ छन् । निराजन र सृष्टिलाई रोमान्टिक अवतारमा देख्न सकिन्छ । भिडियो हेर्नुस् :
गायक नवराज थापाको आवाज तथा राजकुमार बगरको शब्द तथा संगीत रहेको यो गीतको भिडियोलाई निर्देशक निशानले रोमान्टिक र रंगिन बनाएका छन् । अर्जुन तिवारीले छायांकन गरेको भिडियोेको सम्पादन विकास ढकालले गरेका हुन् ।